ओलम्पिक छनोट प्रतियोगिताको मिति तय गर्न निर्देशन - नेपालबहस
गृहपृष्ठ खेलकुद ओलम्पिक छनोट प्रतियोगिताको मिति तय गर्न निर्देशन
६ जेठ, एजेन्सी । अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटि ‘आईओसी’ले सबै अन्तराष्ट्रिय महासंघलाई टोकियो ओलम्पिकका लागि छनोट प्रतियोगिताको मिति तय गर्न निर्देशन दिएको छ ।
कोरोना महामारीका बीच प्रतियोगिता रद्ध गर्ने सहित सबै सम्भावना सहितको प्रतिवेदन बनाउन सहयोग गर्न आईओसीले सम्बन्धित महासंघलाई निर्देशन दिएको हो । पछिल्लो महिना आईओसीले टोकियो ओलम्पिकको छनोटका लागि सन् २०२१ जुन २९ भित्रको समय तय गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यस वर्षका लागि तय गरिएको ओलम्पिक कोरोना महामारीका कारण अर्को वर्षका लागि सारिएको छ । प्रतियोगिताको समय र स्थानको टुङ्गो लाग्ने बित्तिकै हामीलाई जानकारी गराउन अनुरोध गरिन्छ । जसलाई चाँडै छनोट प्रणालीमा समावेश गर्न सकिनेछ ।
आईओसीका अनुसार संशोधित छनोट प्रणाली बन्ने बित्तिकै आईओसीको खेल सञ्चालन म्यानेजरले विपत योजना अनुसार काम गर्नेछन् । जसले ओलम्पिक छनोट प्रतियोगिता हुन नसक्ने अवस्थामा काम गर्न सक्नेछ । आईओसीले टोकियो ओलम्पिकलाई कम खर्च हुने गरि प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न योजना बनाईरहेको समेत बताएको छ ।
अघिल्लो लेखरोनाल्डोसहितका खेलाडीहरु प्रशिक्षणमा फर्किए
अर्को लेखप्रधानमन्त्रीमा अल्पज्ञान, अहंकार र भयंकरको कक्टेल देखिएको भट्टराईको आरोप
आज ४७ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान
सरकारलाई सवारी कर तिर्दै
आज असार १५ गते, कोरोनाका बाबजुद पनि धान दिवस मनाइँदै
सुनको भाउ फेरि बढ्यो, ताेलाकाे कति ?
कतै भर्खरै रोप्न सुरु, कतै सकिनै लाग्यो रोपाइँ
लेनदेनमै मिल्ला त नेकपाको विवाद ?
कोरोना राहत कोषमा भीरकोट सेवा समाज काठमाडौंले दियो १ लाख ७० हजार
अग्रपङ्क्तिमा खटिएका ‘स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च बनाऔँ’